कति ग्रेडिङ ल्याउनेले कक्षा ११ मा के विषय पढ्न पाउँछन् ? - Chandragiri News
Home शिक्षा कति ग्रेडिङ ल्याउनेले कक्षा ११ मा के विषय पढ्न पाउँछन् ?
कति ग्रेडिङ ल्याउनेले कक्षा ११ मा के विषय पढ्न पाउँछन् ?
२०७४, ३ असार शनिबार १७:२७
काठमाडौं,असार ३ – कक्षा १० को परीक्षाको मूल्यांकन लेटरग्रेडिङमा हुन थालेपछि नतिजा कमजोर आएको छ । अघिल्लो वर्षको एसएलसी परीक्षामा नियमिततर्फ चार लाख ३७ हजार तीन सय ३६ विद्यार्थी सहभागी भएकामा सबैभन्दा माथिल्लो जिपिए ३.६ देखि ४.० ल्याउने विद्यार्थी १६ हजार थिए । तर, यस वर्ष एसइईमा नियमिततर्फ चार लाख ४५ हजार पाँच सय ६४ सहभागी विद्यार्थीमध्ये जिपिए ३.६५ देखि ४.० सम्म ल्याउनेको संख्या १२ हजार दुई सय ८४ मात्रै छ ।
Previous articleदेवदर्शन कप ब्याडमिन्टन, ५ टाेली अघिल्लो चरणमा
Next articleदेवदर्शन साकोसको रक्तदानमा १०५ जना सहभागी